Kudyidzana: Kurume 9, 2022
Enda kune IWCA nhengo saiti kunyoresa
Unokokwa kuendesa chikumbiro cheIWCA Online Collaborative-Kufona kweZvikumbiro kuri pazasi. Sezvo isu tichiramba tichinetsekana nedenda uye kukanganisa kwaro pabasa redu nekugara zvakanaka, tinovimba zuva rino pamwe chete richatipa tariro uye simba, mazano uye kubatana.
Mukufona kwake kuCCCCs 2022 Annual Convention, Sachigaro wePurogiramu Staci M. Perryman-Clark anotikoka kuti tifungisise nezvemubvunzo wekuti, "Nei uri pano?" uye kufunga nezvepfungwa yekuva yedu iyo isu nevadzidzi vedu tingave kana tisina munzvimbo yedu.
Sezvo isu tichienderera mberi nekufamba nedenda reCCIDID19 rine isu, tichifambisa musangano pamhepo, taneta neruzivo rwusingaenderane uye runopokana uye marongero akatenderedza masking, vaccin, uye kushanda kubva kumba - tinopindura sei kukoka kwaPerryman-Clark kuramba, kurarama. , kugadzira zvinhu zvitsva, uye kubudirira? Tinotora chikamu sei mu“basa reushingi [ri]ri kutsoropodza uye riri mukuita”? (Rebecca Hall Martini naTravis Webster, Nzvimbo dzekunyora seAkashinga/r Nzvimbo: Nhanganyaya Yakakosha Kuongorora kwevezera rako, Volume 1, Issue 2, Fall 2017) Mune imwe paradigm yehybrid, online, virtual, uye face to-face tutoring, nzvimbo dzekunyorera dzekunyorera dzinogona sei kuramba dzakavhurika kuvadzidzi vese? Kune iyo 2022 IWCA Online Collaborative, zvikumbiro zvinokokwa uchishandisa inotevera mibvunzo sechitubu:
Basa rekururamisira kwevanhu rinotaridzika sei munzvimbo dzedu? Ndiani anonzwa kukokwa munzvimbo dzedu uye ndiani asingadaro? Chii chatiri kuita kuti tive nechokwadi chekupona kwevashandi vedu, vadzidzi vatinoshandira? Chii chatiri kuitei kuti tiite zvinopfuura kupona, asi kuti tibudirire?
Pa2022 IWCA Online Collaborative, tinokoka zvikumbiro zvezvikamu zvinotarisa kutsigirana mukugadzira uye kuyedza, uye kutarisa maitiro, kwete chigadzirwa, chekutsvaga. Zvirongwa zvinofanirwa kuita chimwe kana zvimwe zvezvinotevera:
Koka vamwe vatori vechikamu kuti vafunge, vafungidzire, kana kugadzira chikonzero chezvingangoitika nzvimbo/mafambiro ekunyorera nzvimbo yekutsvaga nezve kubatanidzwa.
Tungamira vamwe vatori vechikamu munzira dzekushandisa tsvakiridzo yenzvimbo yekunyora kutora zvirinani hukuru hwebasa ratinoita, zvichiita kuti nyaya dzedu dzimanikidzire kune vakawanda vateereri vatinobata mukati uye kunze kwezvirongwa zvedu.
Ita kuti vamwe vatori vechikamu vagadzirise mukunyora nzvimbo yekutsvaga, kusanganisira kusundidzira kupokana nezvisingakwanisi kana nyaya dzine chekuita nevarume, vachena, vanogona, uye tsika dzekoloni muacademy.
Goverana mabasa arikuitika kuti uwane mhinduro kubva kune dzimwe nyanzvi dzenzvimbo yekunyora nevarairidzi
Tungamidza vatori vechikamu munzira dzatingashandura vavariro dzavo dzakanaka pamusoro pekubatanidzwa pamwe nekurwisa rusaruraganda kuita matanho akasimba echiito.
Tungamidza vatori vechikamu kuti vafunge uye varonge kuti nzvimbo yedu yekunyora, maitiro, uye/kana mishoni inogona kuchinja sei isu tichiongorora mabatiro anoita COVID kubasa kwedu.
Koka vatori vechikamu kuti vagadzire zvirongwa zvekuita zvekuramba, kurarama, kuvandudza, uye kubudirira.
Zvinogona kutaurwa kuti kusimba kwendima yedu hunhu hwedu hwekushandira pamwe-tinokoka vatori vechikamu kuti vauye pamwe chete kudzamisa kunzwisisa kwedu pachedu-nekubatana ne-kusiyana, kuenzana, uye kubatanidzwa kwese kwese nzvimbo dzekunyorera dziripo.
Nekuti Kudyidzana kuri kwekutsigirana mukugadzira nekuyedza, zvikumbiro zvinofanirwa kutarisisa maitiro, kwete chigadzirwa, chekutsvaga; isu takachengeta imwe yakakosha fomati — iyo “Dash Dash”—yehuwandu hushoma hwezvikumbiro zvinonangana nekugovana zvakawanikwa patsvagiridzo. Zvese zvikumbiro, zvisinei nefomati, zvinofanirwa kuyedza kuisa basa mukati mekunyora nzvimbo yekufunda uye / kana kudzidza kubva kune mamwe maitiro.
Misangano (50 maminitsi): Vafambisi vanotungamira vatori vechikamu muchiitiko chemaoko, chiitiko chekudzidzisa hunyanzvi hunobatika kana marongero ane chekuita nekutsvaga kwenzvimbo yekunyora. Zvikumbiro zvewekishopu zvakabudirira zvinosanganisa nguva yekutamba nepfungwa dzedzidziso kana kufungisisa nezvekubudirira kwechiitwa kana hunyanzvi hwawanwa (nhaurirano dzeboka guru kana diki, mhinduro dzakanyorwa).
Zvirongwa zvinotenderedzwa (50 maminitsi): Vafambisi vanotungamira nhaurirano yeimwe nyaya ine chekuita nekunyorera nzvimbo yekutsvaga; fomati iyi inogona kusanganisira matauriro mapfupi kubva pakati pevaratidziri ve2-4 inoteverwa nekushingaira uye kwakakura kuita/kubatirana nevanopinda kunokurudzirwa nemibvunzo inotungamira.
Kudyidzana Kunyora madenderedzwa (50 maminitsi): Vafambisi vanotungamira vatori vechikamu muchiitwa chekunyora cheboka chine chinangwa chekuburitsa gwaro rakanyorwa pamwe chete kana zvinhu zvinotsigira kubatanidzwa.
Round Robin hurukuro(50 maminitsi): Vafambisi vanosuma dingindira kana dingindira voronga vatori vechikamu kuita zvikwata zvidiki kuti nhaurirano ienderere mberi. Mune mweya we "round robin" makwikwi, vatori vechikamu vanochinja mapoka mushure memaminitsi gumi nemashanu kuti vawedzere nekuwedzera hurukuro dzavo. Mushure menguva dzinenge mbiri dzenhaurirano, vafambisi vanozounganidzazve boka rakazara kuitira nhaurirano yokupedzisira.
Data Dash mharidzo (10 maminitsi): Ipa basa rako muchimiro che20 × 10: masiraidhi makumi maviri, maminetsi gumi! Iyi nzira yeutsva yechikamu cheposter inopa nzvimbo yakakodzera hurukuro pfupi, dzevateereri vese vachiperekedzwa nezvinoratidzwa. Iyo Data Dash inonyanya kunyatsokodzera kushuma nezvekutsvaga kana kukwevera kutarisa kune imwechete nyaya kana hunyanzvi.
Works-in-Progress workshops (10 maminetsi max): Works-in-Progress (WiP) zvirongwa zvichaumbwa nehurukuro dzakatenderedza apo varatidziri vanokurukura muchidimbu mapurojekiti avo ekutsvaga uye vozogamuchira mhinduro kubva kune vamwe vaongorori vanosanganisira vatungamiriri venhaurirano, vamwe varatidziri veWiP, uye vamwe vanoenda kumusangano vanogona kupinda munhaurirano.
Zvikumbiro zvinofanirwa kutumirwa: Kukadzi 20, 2022
Kuendesa chikumbiro uye kunyoresa kune Yekubatana, shanya https://iwcamembers.org.
Mibvunzo? Bata musangano mumwe wemacheya, Shareen Grogan, shareen.grogan@umontana.edu kana John Nordlof, jnordlof@eastern.edu.